Sawiro+Dhageyso+Warbixin Dhismaha Masjidka Jaamaca Magaalada Buulo-fulaay. – Bogga Calamada.com
Sawiro+Dhageyso+Warbixin Dhismaha Masjidka Jaamaca Magaalada Buulo-fulaay.
Masjid jaamaca buulo-fuleey oo dhismihiisu bilowday bishii saddexaad 2016-ka ayaa ku bilowday is xilqaamid ay is xilqaameen dadka ku nool deegaanka buulofulaay iyo magaalooyinka kale ee ku dhowdhow oo wax ku darsaday.
qaabkaÂ xiriirka gudaha 0619663966 qaabka xiriirka dibadda +252619663966
Sidoo kale masjidka waxa loo sameeyay email ay kala soo xiriiraan dadka internetka haysta ee dibadaha jooga. Emailkaasi oo cinwaankiisu yahay.
Masjid iyo dacwaad fidinayseen daaim abid kiine
Ictisaamna diin laga baquu doonayaa abide
Dastuur kii Ilaah baad rabtaan kuna dadaashaane
Ictisaamna daaquud ayuu daawo moodaaye
Dawladii khilaafadad rabtaan kuna dadaashaane
Intisaamna dimoqoraatibuu duub u xirayaaye
Dadaal waxawgu jidhaan waa jihaad kamana daashaane
Ictisaamse Duwalkii kufriyey yuu fatwaw duubi
Khayr badan ilaahay idinkaga rajaynayaa waad wanaajiseen m.j.islaamkaay
zarqaawi says 5 years ago
Waa wax lagu farxo kuna farxa qofkii iiman leh iiman laawe kufarximaayo waa astaanta lagu yaqaaney m.j islaamka wada oo dadaala wuu dhismaya inshaa allah tacaala